Kooxda Chelsea oo farta ku fiiqday goolhaayaha ay badalka kaga dhigan doonto Thibaut Courtois - Wargane News
Home Sports Kooxda Chelsea oo farta ku fiiqday goolhaayaha ay badalka kaga dhigan doonto...
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 14: Thibaut Courtois of Belgium celebrates his team's second goal during the 2018 FIFA World Cup Russia 3rd Place Playoff match between Belgium and England at Saint Petersburg Stadium on July 14, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
Kooxda Chelsea ayaa go’aamisay goolhaayaha badalka u noqon doona Thibaut Courtois, haduu uu u dhaqaaqo kooxda Real Madrid.
Shabakadda “Sky Sports” ayaa sheegtay in kooxda Chelsea ay dooneyso inay hesho goolhayaha caalamiga ah ee xulka England ee kooxda Everton Jordan Pickford.
Shabakada ayaa horey u sheegtay isbuucan in sidoo kale Kasper Schmeichel iyo Jack Butland ay sidoo kale ay qeyb ka yihiin goolhaayaasha ay Chelsea dooneyso in ay ka dhigato badalka Courtois.
Laakiin Jordan Pickford ayaa maamulka kooxda Blue ay dhiganayaan dooqa koowaad marka loo fiiriyo liiska u diiwaan gashan.
Everton ayay u badan tahay inay isku dayi doonto inay ka hor tagto dalabyada kaga imaanay London si ay u difaacato goolhaayaheedan, kaasoo ay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay kala soo saxiixatay 30 milyan oo ginni dhigeeda Sunderland.
Chelsea ayaa ilaa iyo haatan wax dalab rasmi ah ka gudbinin goolhaayaha kooxda Everton Jordan Pickford. mana jirto wax hadal ah ee la xiriira.
Warar badan oo la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in Thibaut Courtois laga yaabo inuu ka tago kooxda Chelsea in lagu jiro suuqan xagaaga, isagoo ku sii jeeda garoonka Santiago Bernabeu.
Tababaraha Chelsea Maurizio Sarri ayaa sheegay inuu doonayo inuu la hadlo Courtois, si uu u arko dareenkiisa kahor inta uusan go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa.